Toko 3349 an'ny Zanakalahy mahatalanjona ao amin'ny lalàna an-tserasera - XperimentalHamid
Toko faha-3349 an'ny Zanaka Mahagaga ao amin'ny Novel maimaim-poana amin'ny Internet
Jolay 25, 2021 by Qasim Khan
Vakio Chapter 3349 amin'ny tantara Ilay Zanakalahy Mahagaga by Ravina Lord maimaim-poana amin'ny Internet.
“Dinika fandriam-pahalemana ?!”
Rehefa nahare ny fandraisan'anjaran'i Hamid hanao dinika fandriam-pahalemana i Walter dia nilaza avy hatrany tamim-pahatezerana hoe: "Ity zanakalahin'i ab! Tch ity dia namono miaramila maherin'ny roa arivo teo amin'ny faritry ny Cataclysmic Front, nahatonga anay tsy hahita tarehy intsony teo amin'ny sehatry ny mpikarama an'ady iraisam-pirenena."
“Ankehitriny dia mbola te hanao resaka fandriam-pahalemana amiko izy! Lazaiko aminao fa tena tsy azo atao mihitsy izany! Izahay, Cataclysmic Front, dia tsy hanaiky izany! ”
Nanontany tamim-pandrenesana ny komandin'ny tafiky ny governemanta hoe: “Tsy te hihavana sy tsy hanafika ianao, hanohy handany fotoana be ve ianao?”
Hoy i Walter tamin'ny feo mangatsiaka: "Ny resaka tsy fandinihana fandriam-pahalemana, tsy nifanaraka ve isika androany vitsy lasa izay?"
“Tamin'izany fotoana izany dia niara-niombon-kevitra tanteraka izahay fa te handrava tanteraka ny herin'i Hamid. Niova hevitra ve ianao izao rehefa afaka andro vitsivitsy? ”
Ny ankilany kosa dia niteny hoe: "Miova tsy miova ny zava-misy any an-tsahan'ady, ary ny antony nilazanay fa tsy vonona ny hihavana izahay tamin'ny voalohany. Satria nahatsapa izahay fa tena hanohitra hatramin'ny farany i Hamid ary tsy hanaiky ny hihavana amintsika. ”
“Saingy tsy mbola nasehony ny fikasany momba an'io? Ka maninona isika no tsy manararaotra mifampiresaka tsara aminy? ”
Hoy i Walter tamin'ny feo hentitra: "Izahay, ny Cataclysmic Front, dia tsy manan-javatra horesahina aminy. Na dia te hihavana aminy aza ianareo, tsy hanova ny fikasana voalohany hataontsika isika ary tena hanakorontana an'i Hamid sy ny olony rehetra! ”
Nihomehy ny ilany. Nisokatra: “Raha mafy ny fanirianao hamita an'i Hamid, dia manoro hevitra anao aho fa maika hanome ady maharary azy, aza mijanona mandany fotoana eto, na dia azonao ekena aza izany, dia zakako tokoa!”
Rehefa avy nilaza an'izany izy dia nilaza tamim-paharetana ihany hoe: “Ahoana izany, alao aloha hisintona ny tafika misy antsika, ary ny Cataclysmic Front, hanohy hanodidina an'i Hamid eto.”
Walter dia nibontsina ny volomaso ary nanozona: “Manadala ahy ve ianao? Tonga hanampy anao amin'ny ady izahay, ary te hiala ny tafikao? ”
“Sa ahoana?” Ny ankilany dia nanontany azy tamim-pandrenesana hoe: Mihevitra ve ianao fa iray ihany ny mpanohitra eto amin'ny firenena, Hamid? ”
“Betsaka ny toa an'i Hamid, fahavalo miandry antsika hodiovina, tsy manana angovo handaniana fotoana miaraka amin'ny lehilahy iray eto isika.”
Raha nilaza izany izy, dia nilaza tamin'ny feo hentitra ny antoko iray hafa: "Ny ambaratongam-pahefana ara-tafika dia nanome torolàlana mazava, raha tsy misy ny vahaolana mazava momba an'io raharaha io ao anatin'ny 5 andro, dia hanaisotra ny tafikay hiverina hiala sasatra sy hiarina isika rehetra."
"Ary avereno amboary ny drafitra ady, na mandray anjara ianao na tsia!"
Hitan'i Walter fa tsy nanao vazivazy mihitsy ilay antoko hafa ary somary natahotra izy.
Tsy natahotra izy hoe hisintaka ny tafiky ny governemanta amin'izao fotoana izao.
Matahotra indrindra izy sao hieritreritra ny tafiky ny governemanta fa tsy ampy tsara ny tanjaky ny Cataclysmic Front ary hamela irery ny Cataclysmic Front.
Raha mitranga izany. Ny ezaka sy sorona rehetra nataon'izy ireo tany am-boalohany dia ho zava-poana.
Raha vantany vao mihemotra ny herin'ny governemanta, raha vantany vao mijanona ny fiaraha-miasan'ny roa tonta, ny raharaha momba ny velaran-tany 100 kilometatra toradroa, dia azo antoka fa hafoina!
Rehefa nieritreritra an'izany i Walter dia nanoro hevitra haingana fa: "tsy maika hisintaka ianao, Hamid amin'izao fotoana izao handray an-tanana ny fangatahana fifampiresahana momba ny fandriam-pahalemana, ny antony dia satria tsy afaka nifikitra izy."
“Ka te hitady fomba hiainana amin'ny fifampiresahana fandriam-pahalemana izy alohan'ny hirodanan'ny tsipika iray manontolo, raha miziriziry tsy mivadika isika. Angamba ho rava irery ilay ilany! ”